Torkia: Tara-pahazavana Bitika Amin’ny Fifampiraharahana Amin’ny Mpioko Kiorda · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Oktobra 2012 12:32 GMT
Tamin'ny herinandro lasa teo ny praiminisitra tiorka Recep Tayyip Erdoğan no nanamarika ny fanombohan'ny [mg] fitadiavana hifampiresaka bebe kokoa eo amin'ny PKK (Antokon'ny Mpiasa Kiordistana) sy ny governemanta. Tany aloha ny mpioko Kiorda no niantso matetika ny isian'ny fifampiraharahana, ary noho ny fiitatry ny gidragidra, dia lasa manery ny tokony isian'izany fifampiraharahana izany.
Tsy dia nampihiratra loatra ny vaovao satria matetika ny governemanta tiorka no tsy manatontosa ny fampanantenany amin'ny vahoaka kiorda.
Araka ny nolazain'ny Kiorda iray monina any Chicago, tetika vaovao ataon'ny PM Erdoğan io mba hahatsara toerana azy mandritra ny fifidianana ankapobe hotanterahina manaraka. Ary navoitran'i Osman Ates, na ny governemanta tiorka na ny hetsika Gulen dia samy mino fa ho tafaharo amin'ny vahoaka rehetra ny vahoaka kiorda.
Nolazain'ny filoha mpiara-mitantana ny antoko Fandriampahalemana sy Demokrasia (BDP) Selahattin Demirtaş vao haingana tao amin'ny gazety mivoaka isan'andro Hurriyet fa “mandrava ny lalana mankany amin'ny fifampiresahana ny zavatra tahaka izany [fanesorana ny tsy fahazoana misambotra azy].” Nampiany hoe:
Tsy mazava tsara ny valinteny, fa hiharihary izany amin'ny alahady 11 Oktobra 2012 mandritra ny fivoriamben'ny AKP, izay hiresahan'i Recep Tayyip Erdoğan lavalava kokoa momba ny Fidiran'i Torkia ao amin'ny Vondrona Eoropeana, ny olana ara-toekarena mianjady amin'i Torkia, ny firehidrehitry ny herisetra avy amin'ny mpioko kiorda sy ny politika vaovao manoloana ny firenena manodidina.
Mandritra ny kabary anatin'izany fivoriambe izany ho mety hamaliana ny ahiahin'i Demirtaş momba ny drafi-pifampiresahan'ny praiminisitra tiorka izay nilaza tahaka izao tamin'ny tafatafa farany natao taminy:
Vao tsy ela izay ny filoha mpiara-mitantana ny Antokon'ny Fandriampahalemana sy ny demokrasia (BDP), Gülten Kışanak, no niteny: